दु’खद खबर : एकै पटक जन्मिएका चार सन्तानमध्य दुईको मृ’त्यु ! – Online Khabar 24
दु’खद खबर : एकै पटक जन्मिएका चार सन्तानमध्य दुईको मृ’त्यु !
रुपन्देहीमा जन्मिएका चम्ल्याहामध्ये २ शिशुको मृ’त्यु भएको छ ।
एकको शनिबार र अर्कीको आइतबार मृ’त्यु भएको युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका जनसम्पर्क अधिकृत सुशिल गुरुङले जानकारी दिए ।
समय अगावै जन्मिएको, तौल कम भएको र प्रतिरो’धात्मक क्षमता नभएकाले शिशुहरुको मृ’त्यु भएको हो कात्तिक ६ गते अ’स्पताल भर्ना गरिएकी पाल्पाको माथागढी गाउंपालिका–१ चिदीपानीकी २४ वर्षीया सीता सार्कीले ९ गते दिउँसो ४ छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् ।
आर्थिक स्थिती कमजोर रहेको सीताका छोरीहरुको उपचारका लागि विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले सहयोग गरिरहेका छन् । eKantipur बाट साभार समचार
पाल्पामा जुत्ता पसलमा कालिगढको काम गर्दै आएका सन्तोषले श्रीमती गर्भवती भएपछि तानसेनस्थित मिसन अस्पतालमा परीक्षणका लागि नियमित लगिरहन्थे।
तानसेनमा एक महिनाको अन्तरमा दुईपटक र कात्तिक ६ गते भैरहवा मेडिकल कलेजमा पनि एकपटक भिडिओ एक्सरे गर्दा तीन बच्चा देखिए पनि मंगलबार शल्यक्रिया गरेपछि मात्रै चार बच्चा भएको थाहा भएको हो। ग’र्भवती भएको सात महिनामै चार शिशु जन्मिएकाले कम तौलका भएको भैरहवा मेडिकल कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले जानकारी दिए।
अस्पतालका अनुसार शिशुहरूको तौल एक किलो ६० ग्राम, एक किलो एक सय ग्राम, एक किलो एक सय ३० ग्राम र एक किलो एक सय १५ ग्राम छ। सबै शिशुको तौल एक किलोभन्दा अलिकति मात्र बढी भएकाले सबैको आइसियूमा उपचार भइरहेको पनि उनले बताए। साढे दुई किलोको शिशुलाई सामान्य मानिन्छ। यी चारै शिशु स्वस्थ रहे पनि तौल कम भएकाले एनआइसियुमा राखी उपचार गरिएको गुरुङले बताए। साभार गरियको खबर ।
Prevबिना यौ’नांग कसरी शा’री’रिक सम्पर्क गर्छन्, यी पुरुष ? जान्नुहोस रोचक कहानी
nextश्रीमान र छोरालाई बि’च’ल्ली बानाएर हिनेकी आमाको र’ह’स्य खोले पिडित छोराले भन्छन वि’श्वा’स’घा’त भयो घरको अबस्था दयनिय (भिडियो सहित)